kitaabka Bukhaari in loo noqdo xalka maahee ee xalka waa in kitaabka Alle loo noqdaa!
Waxey igu noqotay layaab iyo amakaag,marna waaba ka naxay fikir qore maqaalkiisa aan ka akhriyey Internetka oo uu ciwaankiisu ahaa(Xalka Somalida waxaa uu ku jiraa akhrinta saxiixul bukhaari).
Qorahan qoray maqalkan wuxuu ku xadgudbay kitaabka saxiixul bukhaari,dhowr sababood aawadood,kitaabka Allena waa uu hilmaamay waxaanse ka naxay markaan sii dhadhansadey qiso layaab leh oo been abuur ah oo uu ku xoojiyey xadgudbkiisa,wuxuuna yiri mar uu qisadaa ka hadlayey(boqorkii u talin jirey Masaarida oo waagaa Sudan ay ka mid ahayd ayaa iyagoo dagaal waaga kula jirey boqortooyadii Ethopa lagu jabiyey dagaalkii Masarida dabeetana boqorkii baa amar ku baxshay in saxiixul bukhaari la akhriyo,waxaana loo akhriyey siwanaagsan inkastoo sanadkii axaadiista laga tagey,hadana ciidankii waa la soo jabiyey.....).Waxaa kaloo hadalkiisa ka mid ahayd iiguna darneyd mar uu yiri (doon yaha daga ee badaha quusa si kastaba ha u dhacdee hadii kitaabka Bukhaari la saaro ma dagaan.....taa oo u ku booriyey markii danbe in dadka tahriibayaasha ah ay ku wanaagsanaan lahayd inay kitaabkaa qaataan oo doonyaha saartaa saysan u degin.....!).
Hadaan ka yara faaloodo maqaalka qorahan,oo noqdey mid lala yaabo,waxaan is iri waa nin diinta aan aqoon hayeeshee xamaasad badani ku jirto,taa oo keenaysa in diinta khalad laga galo,Allena lagu been abuurto.
Horta waa marka horee xalka Somalida iyo kan dadka Islaamka oo dhan wuxuu ku jiraa kitaabka Alle isaga ayaana mudan in la hor mariyo,marka sidaa la leeyahay maaha in akhrintiisa loola jeedo ee waa ku dhaqankiisa iyo isku xukunkiisa.
Tan labaade wax la talo saarto oo dhibaatooyin laga magangalo Alle ayaa ugu kheyr badan cidii wax kale magan gashaana kitaabka bukhaari haduu ahaan lahaa iyo wixii la mid ahba Alle ayey dulmi ka galeen.Ama dooni saaro ama gaari saaro e.
Sadex ayaa Islaamka marjac u ah meelay laabtaan yacni.1-kitaabka Alle,2-Sunada Rasuulka,oo aan lagu soo(qeydin)lagu soo koobin Bukhaari iyo muslim,3-Ijmaac waxa ay Muslimiinta isku raacaan xumaantooda iyo wanaagooda,oo laftigiisa soo baxay waa ijmaacee xiligii Abuubakar Asidiiq,waxaa soo baxay kadibna Ijtihaad iyo qiyaas oo lagu daray wax yaabaha dadka Muslimiinta ay u baxsadaan marka arini cakiranto.
Saxaabadii Rasulka markii arin dhacdo waxay u noqon jireen ka eegi jireen Kitaabka Alle,hadii laga waayo Sudanada Rasuulka(swc),hadii laga waayo ayaa dadka muslimiinta loo bandhigi jirey,oo xiligii Abuubakar iyo Cumarba dadka ayey arimahaa oo kale kala tashan jireen.Waxa ay dadka Muslimiinta isku raacaan waxaa weeye biyo kama dhibcaan raacidooda oo waa lagu khasban yahay,hadii kale waxa aad ku dhaceysaa goodin Alle(sw)uu ku yiri kitaabkiisa Qur'aanka ah(Ninkii raaca wadada Muslimiinta wado aan ahayn,waxaanu la jir uga dhigaynaa wixii uu la jiray oo uu raacay jahanama waa dhaxal siinaa).
Qorahani waxaad moodaa in uu kitaabkii Alle ka hor mariyey kii Bukhaari,isaga oo laga yaabo inuusanba dareensanayn,hadii xataa uu yiraahdo kitaabka bukhaari markaan leeyahy waxaan ula jeeda waxa ku qoran oo ah hadalkii rasuulka waa khalad laftigeeda oo kitaabka Alle ayaa horeeya teeda kale talasaaradka intaa le'eg xagee buu ka soo akhriyey,war Alle meeyey Bukhaari kitaabkiisa muxuu qaban karaa.
Bukhaari iyo Muslim, waa laba nin oo isku ilzaamiyey inay qoraan axaadiista saxiixa ah ee rasuulka(swc)ka sugnaatay.Ahlu Suna wal Jamaacana waxey qabaan oo isku raacsan yihiin inay yihiin kutubta ugu kheyrka badan kitaabka Alle marka laga reebo,taa ma keeneyso in la tala saarto sida uu saaxiibkeen ku booriyey tahriibayaasha doomaha raaca.
Si kastaba ha ahaatee diinta Islaamka darajooyin bay kala leedahay darajada koowaad waxaa leh mudanna in la raaco kitaabka Alle wax kalena aan looga mashquulin rasuulka(swc) waa uu diiday in waagii hore wax laga qoro isagoo ka baqayey dadka inay Qur'aanka uga mashquulaan.iyo in lagu fogaado.
F.G.waxaan ka xumahay maqaalkan oo aanan fursad badan oo aan ku faah faahiyo aanan u helin inaan intaa ku soo gaabsado iyadoo aanan mowduuca si baahsan uga hadlin taasi wakhtiga ayaa ii diiday hayeeshee maqaalo danbe ayaan uga faaloon doonaa bal Manzilada,darajada Qur'aanku lee yahay iyo Sunada Rasuulka (swc) kadib tan Bukhaari oo uu saaxiibkeen ku xadgudbay!.